Indlu ethokomele kakhulu enamapulangwe e-Mariager! - I-Airbnb
Indlu ethokomele kakhulu enamapulangwe e-Mariager!
Indlu encane ibungazwe ngu-Marian
I-Kirkebakken 4 yindlu endala enamapulangwe eyakhiwe ngo-1780 emaphakathi e-Rosernes ngu-Mariager. Indlu inengadi encane enethala elinetafula lasengadini, izihlalo nezoso. Indlu ivuselelwe ngokuphelele ngokufudumeza kwangaphansi kanye neziko elivulekile. I-Kirkebakken 4 yindlu endala, lapho ukulungiswa kwenzeke khona ngokuhlonipha indlu, ngakho-ke kukhona umehluko wezinga phansi kanye nezitebhisi eziya esitezi sokuqala. Indlu itholakala enhliziyweni ye-Mariager futhi ngombono wedolobha elihle nelomlando i-Klosterkirke.
I-Mariager iyidolobhana elincane elibukekayo nelithokomele, isikhungo salo sedolobhana saziwa ngezindlu zalo ezindala ezigwegwile namatshe akhiwe ngamatshe. Idolobha lihlehlela emuva cishe ku-1400 futhi likhipha umlando osukela ku-Iron Age, iNkathi Ephakathi kanye neMpi Yezwe II.
U-Mariager waziwa ngesonto elihle lase-Kloster, i-Rosenhave enhle enendawo yokudlala enendawo yokudlala yemvelo.
4.85 · 34 okushiwo abanye
I-Kirkebakken 4 inombono ka-Mariager Klosterkirke. Kukhona nebanga lokuhamba eliya eRosenhaven elinendawo yokudlala yemvelo. Ngaphezu kwalokho, idolobha lihlinzeka ngezinto ezikhangayo ezifana ne-Mariager Salt Center, isikebhe sokuvakasha i-Svanen, ujantshi wesitimela kanye ne-Gravhøjen Hohøj.
Izindawo zokudlela ezisedolobheni zifaka i-Postgården, i-Mariager Bistro ne-Confectionery, i-Landgangen ne-Torvets Pizzeria.
Uma uthanda impilo yangaphandle, kunamathuba amaningi okuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili yi-fjord enhle kakhulu yaseDenmark ezungezwe amahlathi amahle.
I-Mariagerfjord iphinde inikeze ithuba lokudoba.
Izilimi: Dansk, English, Deutsch
Hlola ezinye izinketho ezise- Mariager namaphethelo